कुमार र उनीहरू – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७६, १२ असार बिहीबार ०७:०९ June 30, 2019 1469 Views
प्रिय पाठकवृन्द ! एकछिन आँखा बन्द गरेर सोचौँ त– यो कति क्रूर र निर्दयी घटना छ ! के यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्दैन ? यसैगरी बर्दी र बन्दुकको दुरुपयोग बढ्दै जाने हो भने र यसको विरुद्धमा क्रान्तिकारीहरूले पनि बन्दुक उठाउने हो भने के होला देशको स्थिति ? के हाम्रो प्रहारको सामना गर्न सक्छन् दलालहरू ? निःशस्त्र कार्यकर्ता कुमारको टाउकोमा गोली ठोकेर बडो पुरुषार्थ देखाए भन्ने हत्याराहरू के जनताको बन्दुकका सामु उभिन सक्छौ ? फायर जनताले पनि खोले भने के होला नेपालको हालत ? आमा बेचेर बोरामा पैसा पोको पार्ने दलालहरूलाई न देशको चिन्ता छ, न त जनताको । न यिनलाई चिन्ता छ युद्धले निम्त्याउने भयङ्कर विपत्तिको । त्यसो हो भने नेपाल प्रहरीका अफिसर र जवानले सोच्नु पर्दैन आदेश सही छ कि गलत भनेर ? अनि अपराधीहरूले दिएको फर्मान हुबहु लागू गर्न पुगे कहाँ रहला नेपाल प्रहरीसचेत, सतर्क र चेतनशील शक्ति हो भन्ने परिचय ? कहाँ बाँकी रहला मानवताको मूल्य र मान्यता ? कहाँ रहला प्रहरीको सत्य सेवा सुरक्षणम्को नारा ? के होला मुस्कानसहितको सेवा नेपाल प्रहरीको ? कहाँ रहला जनता–प्रहरी मैत्री वातावरण ? कहाँ रहला समुदायसँग प्रहरी अभियानको मर्म ? त्यसैले हामी नेपाल प्रहरकिा सम्पूर्ण अधिकृत र जवानहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ– माथिको आदेश पालना गर्नुअघि एकपटक हैन, दसपटक हैन, सयपटक सोच्नुहोस्– म कसकालागि, के गर्न जाँदैछु भनेर, गहिरो जिम्मेवारीबोधका साथ सोच्नुस्, विदेशमा बेचिएका अस्मिता लुटिएका तपाईंका दिदीबहिनीको अवस्था, घोत्लिएर सोच्नुस्– पैसा कमाउन विदेश गएको तपाईंको पल्लाघरे कान्छा काकाको छोरा बाकसमा लास बनेर फर्किएको अवस्था । निधारमा हात राखेर सोच्नुस् भ्रष्टाचारले खोक्रो बनाएको, इमानदारी र नैतिकताको खडेरी परेर अस्तव्यस्त भएको मुलुक र समाजको अवस्था अनि निकाल्नोस् निष्कर्ष र बढाउनोस् पाइला ! कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेता, कार्यकर्ता राष्ट्रको बर्बादीका निम्ति जिम्मेवार छन् भने लखन्ती खोलाको बाटो ढुकेर नक्कली मुठभेडमा कुमारहरू मार्नै पर्दैन । आदेश जारी गर्नोस्– हामी प्रहरी हेडक्वार्टरमै आउँछौँ, खुलामञ्चमा लगेर फाँसीमा झुन्ड्याउनुहोस् । हामी हाँसीहाँसी मृत्युवरण गर्न तयार छौँ । तर राष्ट्र र जनताको बर्बादीको जिम्मेवार वर्तमान दलाल र फासिवादी पार्टी र तिनका नेता हुन् भने तपाईंलाई तिनको आदेश मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । तपाईं आफूलाई किन कलङ्कित बनाउनुहुन्छ ? जब एकदिन वास्तविकता सतहमा आउँछ, तपाईंको आत्माले कहाँ पाउँछ शान्ति ? जब तपाईंको सन्तानले सोध्नेछ,‘बाबा, कुमार अङ्कललाई किन गोली हान्नुभो ?’ तपाईंको छाती पीडाले भत्भती पोल्नेछ । छोरालाई के जबाफ दिनुहुन्छ ? त्यतिबेला के आफूलाई नढाँटी गर्वका साथ भन्न सक्नुहुन्छ– त्यो अपराधी थियो, ठोकिदिएँ गोली ! सक्नुहुन्छ भन्न ? अहँ सक्नुहुन्न, कदापि सक्नुहुन्न किनकि मानिसले दुनियाँमा सारा संसारलाई ढाँट्न सक्छ तर आफूले आफैँलाई कदापि ढाँट्न सक्दैन ।